Farmaajo oo ku dhawaaqay inuu mar kale yahay musharax Madaxweyne | Dhacdo
Home Wararka Maanta Farmaajo oo ku dhawaaqay inuu mar kale yahay musharax Madaxweyne
Farmaajo oo ku dhawaaqay inuu mar kale yahay musharax Madaxweyne
Madaxweynaha Somaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa saqdii dhexe ee xalay ku dhawaaqay inuu yahay musharax mar kale u taagan jegada madaxtinimada ee dalka.
“Aniga oo ka duulaya baahida hoggaamineed ee dalkayga iyo dadkayga, tixgelinaya codsiga shacabka Soomaaliyeed ayaa waxaan go’aansaday inaan mar kale isu sharaxo xilka Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Somaliya, si aan u sii socod-siino is bedelka ka socdo dalka.” Ayuu yiri Madaxweynaha.
Madaxweynaha ayaa Xildhibanaada Labada Aqal ka codsaday inay codkooda siiyaan, si ay wadajir ugu guuleystaan, una horumariyaan dalka iyo dadka, isla-markaana ay u sii socod-siiyaan is bedeldoonka ka soo bilowday buu yiri 8-dii February, 2017.
“Sidaas darteed waxaan halkan ka soo jeedinayaa laba baaq oo muhiim ah. Baaqa koobaad waxaan u dirayaa Xildhibaanada sharafta leh ee Labada Aqal, waxaan ka codsanayaa inay codkooda i siiyaan, oo aan wadajir ugu guuleysano, una horumarino dalkeena iyo dadkeena, si aan u sii socod-siino is bedeldoonka ka soo bilowday 8-dii February, 2017.” Ayuu yiri Madaxweynuhu.
Madaxweynaha ayaa yiri “Baaqa labaad waxaan u dirayaa shacabka Soomaaliyeed, meel walboo ay jooggaan, waxaana si qadarin leh aan uga codsanayaa inay mar kale igu garab istaaggaan, dib u doorasho ku dhisan danta shacabka. Xubin kasta oo ka mid ah Baarlamaankeena waxay meteshaa ku dhawaad lixdan kun (60,000) oo shacab ah.”
Waxa uu intaasi ku daray “Waxaan Alle uga baryaynaa in dalkeena uu ku maneysto nabad waarta iyo nolol wanaagsan. Waad mahadsan tihiin.”
Waa markii ugu horeysay ee Madaxweyne Farmaajo uu shaaciyo inuu yahay musharax mar kale u taagan jegada Madaxweynaha Dowladda Federaalka, tan iyo markii uu muddo xileedkiisu dhammaaaday, muddo shan iyo toban bilood laga jooggo.
Previous articleCabdi Xaashi oo la kulmay Wakiilka Qaramada Midoobey
Next articleKenya on alert after Al-Shabaab militants kill ten troops in Somalia